Best Gay Sugar papa & nwanyị nwere mmasị nwanyị Sugar Mama Mmekọ
Sugarlove® bụ ngwa websaịtị na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na usoro nke sugardaters mba ụwa.
Ị nwere ike Nzuko na ntinye Dayies Gay, Dọkịta Mịnịstrị na-agbakwunyere Queer Sugar Girls & BoyToys sitere na mpaghara LGBTQ.
Iji tụọ atụmatụ ole na ole, ịnwere ike izipu & zaghachị Ozi, kekọrịta ihe onyonyo na vidiyo, Kpaa nkata Via Audio ma ọ bụ vidiyo site na ọrụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na ntanetị Sugarlove®. N'ihi ya, nweere onwe gị isonyere anyị ma mee ka ndị otu anyị nyere gị aka ịchọta onye nwere ike ịmị mkpụrụ obi!
Anyị niile na-anụ banyere etu ndị ụmụ nwanyị Gay na ndị nwanyị nwere mmasị nwoke na nwanyị si na-ekpori ndụ nke nri abalị, okooko osisi, onyinye ihunanya wdg. Agaghị akpọ asị n'ihi na ebe nrụọrụ weebụ anyị nwere ike inyere gị aka ịchọta nwanyị Mama nwanyị Lesbian ma ọ bụ Gay Sugar Daddy nke ị họọrọ. Anyị nwere ụzọ dị iche iche ga - esi eme mmegharị mmekọrịta na - eme ka mmekọrịta mmekọrịta na - akwụghachi ụgwọ kwe omume site na iji otu bọtịnụ.
N’ezie, anyị nwere ọtụtụ Sugar Babies ma e jiri ya tụnyere ọnụ ọgụgụ ndị nne na nna Sugar. Agbanyeghị, profaịlụ nke isi ihe nwere ike ime ka ị ghara ịdị na - egbochi obere ụmụaka LGBT Sugar.
Etu ị ga-esi chọta Gay Sugar papa ma ọ bụ ndị nwanyị Lesbian Sugar Mama?
Akụkụ kachasị adaba nke kwesịrị oge gị na itinye ego gị nwere ike ịbụ gburugburu metụtara akụ na ụba. Sugarlove® na-atụ aro nke Bay Area, ire ala, ụlọ okushon, uru ọrụ ebere, klọchị ụgbọ mmiri, ụlọ ahịa ọla mma, ihe omume ọdịnala, casinos dị mma, ụlọ mmanya na ụlọ nri.
Ilekwasị anya na ntụpọ ndị a kpọtụrụ aha na -eme ka ohere gị nwere ike ị nwere ike ịnwe mmụba Sugar Momma ma ọ bụ Gay Sugar Daddy. Ka o sina dị, ọchụchọ ahụ nwere ike imetu mkpịsị ụkwụ gị na obere akpa gị ma ọ bụrụ na ị ga - emezughị nchụso gị.
Ichoro iwere mama mamma di na nwanyi Lesbian ma obu nwoke gay?
Nwanyị Lesbian Sugar Mama ma ọ bụ Gay Sugar Daddy na-adọrọkarị mmasị ntorobịa. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ọ bụghị naanị ịdabere na ọdịdị ihu gị dị mma na enweghị uche nke afọ 18. Enwetala m ihe na-ezighi ezi, ọdịdị ahụ bụ nnukwu uru. Ọ bụ ezie na inwe “Ile Nlere Dị Mma N'anya”
Na-eyi uwe ga-amasị gị mgbe niile n'agbanyeghị na ọ na-egosi gị na ị na-elekọta onwe gị anya. Ọzọkwa, mee ka ntorobịa nwee ume. Egwuregwu egwuregwu, n'ihi na ụmụ nwoke nwere mmasị nwoke na nwanyị nwere mmasị nwanyị na nwanyị nwere mmasị ịmara ihe ha chọrọ, n'ihi ya, anaghị egbusi oge.
A na-atụ aro igosipụta echiche ọhụrụ na echiche ziri ezi na ndụ na-enweghị ime ka obi ju ya afọ. Ọrụ gị bụ ịtụte onye ntorobịa ha furu efu site na obere enyemaka site n'ịdị mma gị na echiche egwuregwu.
Ihe ị ga-ekwu!
Gosiputa ya site na imesi ike ihe ndi mmadu choro maka ya, na-eme ka o lebara anya n’amaghi nwoke ma o bu n’ebe i huru ya. Na-atụ anya na ọ bụ ụzọ aghụghọ dịịrị ndị okenye / ụmụ nwanyị tozuru etozu ma na-ahụ ịnụ ọkụ n'obi ntorobịa gị karịa.
Ekwekwala ka afọ ihe dị n’etiti bata n’etiti; kama gosipụta na ị nwere ike ịkọ gbasara isiokwu ndị tozuru etozu. Ikwesiri ịchọta onwe gị na ebe a na - ese ihe, wee merie obi ya site na ikwu banyere nka na - agabeghị onye ọkachamara.
Diese Gay Sugar Dansies & Mbian Lesbian nwere ike iduzi isiokwu maka ịhụ ihe onwunwe n'anya, ebe gị na gị na-akpagharị. Detuo ya / ya, ma jide n'aka na mkparịta ụka ahụ akwụsịghị ebe ahụ. Buru n’uche, ikewapu onwe gi n’ebe ndi na-egwu ọla edo bu ndi n’eburu n’obi.
Ghazie ya mma site na itinye uche ya n'isiokwu na-adọta mmasị gị. Mee ka o doo anya na ị na-erite uru na ọkwa ya, yana ị nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye karịa John / Jane Doe nkịtị.
Sonye na # 1 Sugar Dating Network!
Art nke Chase
N’okpuru ụdị ọnọdụ a, a na-atụ anya ka ụmụ Na-eto eto rụọ ọsụsọ. N’ikwu ya nkenke, n’ihi na ụmụ nwoke / ụmụ nwanyị bara ọgaranya, ndị okenye na ndị okenye nwerela ikike iji nweta ya. Ọ bụrụ na ọgaghị gị, taabụ bụ nsogbu. Naanị mgbe ị matarala ịnwere ike iji aka gị, gbanwee ọrụ site na ịhapụ ya ka ọ na-achụ.
N'oge a, Gay Sugar Daddies & Nwanyị nwere mmasị nwanyị Sugar Mamas choro ka odi gi nma. Ọ bụrụ na m nwere ike, ị ga - eme ka ya / ya kpụrụ gị rie nri abalị, bulie gị obere obere onyinye dị mma, ma kwekwa ya ka o mee ihe niile ị na - eme. Gaanụ chọọ igbu mmadụ ahụ, na-enye ha ịhụnanya na ịhụnanya, yabụ, ha na-enwe ọfụma ọzọ!
Idebe A Mmekọrịta Miri na Mọọpụ
Ozugbo ị meriri Gay Sugar Daddy & Lesbian Sugar Mama, ị ga-eme ka ha nwee obi ụtọ, nwee mmasị na afọ ojuju. Nọgide na-egosipụta ntorobịa ha mara mma, ebe ha na-emepe maka otu ntozu okè, iji dabara na ụdị ndụ ha. Jiri afọ ojuju na-akwụ ụgwọ ihe niile, ekwekwala ya na ikwu maka idozi ọnụ.
Kama, tụọ ihe ntụrụndụ na nke ọhụrụ ị ga-aga ma ọ bụrụ na ọ bụ ụdị nke onwe gị, tụwazie izu ụka ịhụnanya na obodo.
Lọ akwụkwọ kọleji na ị drinkingụ mmanya ruo mgbe ị kwụsịrị apụ apụ apụ. Omume a ga - ewepu herand ziga ha na acho onye ozo. Debe ya ka o di uto ma mara nma, ma gosiputa usoro gi. Jiri 'ọnọdụ ọ bụla' wedaa 'ala ahụ'.
Ihe Isi Ike Iji Zere
Daddies sugar gay nke ndị bara ọgaranya na ndị nwere mmasị nwanyị nwere mmasị na-eche na ị bụ otu n'ime ihe ha nwere n'ihi afọ na ọkwa ha. N’ihi ya, mee ka ha ghọta na ọ bụ mmekọrịta bara uru nke karịrị nke ịhụ ihe onwunwe n’anya.
Emela ka obi ghara iru ya ala site na mgbe obula ị na-eto onye ntorobịa gi. Ọ bụ ihe ha ka na-emefu ego na gị mgbe niile ... Otu esi amasị ha apụl?
Nnukwu ịkwụ ụgwọ
Menmụ nwoke na ụmụ nwanyị tozuru oke nwere uru romantically n'ihi ogologo ndụ ha. Agbanyeghị gị ka akpachapụrụ anya na-elekọta, ọ nwere ike bụrụ nke kacha mma mkpebi ị kacha eme. Yabụ chọtara onwe gị Gey Sugar Daddy na / ma ọ bụ Mama Mama, n'ihi na ọ na-akwụ ụgwọ ihe karịrị otu ụzọ!
Tags: Gay Sugar BabyGay Sugar DaddyGay Sugar MamaNwa Nwanyị LesbianMama nwanyị nwere mmasị nwanyị
12 ọnwa gara aga
Osote100% Free Dating App / Site. Sugar Daddy, Mama & Baby »
Previous «Otu esi achọta sugar papa, Momma & Babe On Craigslist
Audrey Lingle ekwu, sị:
January 12, 2020 na 7: 04 pm
Anọ m na mama shuga maara onye ọ chọrọ na ndụ ọ chọrọ ka a gwọọ ya na-akwanyere onye ọkaibe ma ama ụtọ
Lylụ nwanyị ekwu, sị:
May 31, 2020 na 8: 32 am
Busco una sugar mamy para que me complasca mis caprichos a cambio de mi tụnyereñia hasta quizas intimidad….
Nicole ekwu, sị:
June 27, 2020 na 5: 34 pm
Quiero una suggar mammy hare lo que me pida, pero quiero que tambien me complasca <3